သတင်း - ငြမ်းပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးငြမ်း၊ အလွှာဆောက်လုပ်ခြင်း၊ သွပ်ရည်ပါသည့်သစ်သားပိုက်၊ သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိပိုက်၊ ပြပွဲဒိုင်းခွေ၊ အဖြစ်အပျက်၊ တရုတ်ငြမ်း၊ တရုတ်ငြမ်း၊ အငြိုးသစ်၊ အကာအကွယ်မျက်နှာပြင်၊ ကုန်းပြင်မြင့်တက်၊ ငြမ်းချိတ်၊
အသေးစားသွန်းခြင်း, ကြီးမားသောခြားနားချက်! ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ရေဖန်ခွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုရန်တောင်းဆိုကြသနည်း (၂)
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းကျနော်တို့စျေးနှုန်းအကြောင်းပြောဆို ရေဖန် connector ကို သဲသွန်း connector ကို၏2ဆဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ,မိတ်ဖက်များစွာ ရှုပ်ထွေးခံစားရပါလိမ့်မယ်, အဘယ်ကြောင့် ငါတို့နေဆဲ ရေဖန်ခွက်ဖြစ်စဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ?
သဲသောင်ပြင်ပြproblemsနာအချို့အကြောင်းပြောပြပါရစေ connectors လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာ:
တလက်ပေါ်သွင်ပြင်အရည်အသွေးသည်ထုတ်ကုန်၏အလုံးစုံပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည် ဆင်းရဲတယ်ပိုမိုတိုက်ရိုက်, လယ်ဂျာ အဆိုပါအတွက်ယိုစိမ့် plating ဖြစ်ရပ်ဆန်းအများကြီးဖြစ်လိမ့်မည် သွပ်ရည်စိမ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကို ၏ မျက်နှာပြင်ကအရမ်းလွန်းတယ် ထို ... ဖြစ်မည် ထုတ်ကုန်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုလျှော့ချ။
1) အမြစ်၏အမြစ်မှာတည်ရှိ connector ကိုမည်သည့် အကြောင်းမရှိ ဂဟေဆော်သောအပေါက်များနှင့်ပိုက်နှင့်အတူဂဟေဆော်သောအခါဂဟေအရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်;
၂) အချိန်ကာလ၏တည်ရှိမှုသည်ယေဘူယျအားကိုလျော့နည်းစေသည် connector ကို, ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် connector ကို နှင့်မြေတပြင်လုံး၏အပိုင်းအစရရှိလာတဲ့ စာအုပ်.
03.much more Burr, ဆင်းရဲသောရှုထောင်တိကျစွာထိန်းချုပ်မှု
အတော်များများက burrs အတွက် connector ကို အပြင်ပန်းသွင်ပြင်အရည်အသွေးကိုထိခိုက်ရုံသာမကအလုပ်သမားများ၏ခြစ်ရာများကိုလည်းထိခိုက်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကအဲဒါကိုပါအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်စိုက်ထူ။ အဆိုပါ burrs လျှင်မဖယ်ရ နှင့် စိုက်ထူခဲ့သည် အချိန်တွင်ဂဟေဆော်ပြီးနောက်အရည်အသွေး အလိုတော် ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုသက်ရောက်သောစံနှင့်မကိုက်ညီပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရသိရသည် ရေဖန် connector ကို ပုံသွန်းလောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပုံသဏ္oneာန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံသည်အတော်အတန်တည်ငြိမ်သည်။ သဲသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် connector ကို, အမှိုကွဲကွာနေကြသည်။
အထက်ပါအကြောင်းပြချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖောက်သည်များ ပို၍ ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်သည် ရေဖန်ခွက် connector ကို ပိုမိုမြင့်မားယူနစ်စျေးနှုန်းနှင့်အတူ။